Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A November 2010 (5)
Q and A November 2010 (5)
1. ချက်ရဲ့ ဘယ်ဖက်နားကို တခါတလေ ထိမိရင် နာနာနေပါတယ်ရှင်
2. ပန်းသေ (သို့) ပန်းညိုး ဖြစ်နေပြီလားဆိုပြီး
3. ဒါပေမဲ့ ဒူးတွေ နာပါတယ်
Q: သမီး ချက်ရဲ့ ဘယ်ဖက်နားကို တခါတလေ ထိမိရင် နာနာနေပါတယ်ရှင်။ ဘာရောဂါများ ဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာ သိရပါမလား ရှင်။ တခါတခါ ထိမိရင် နာပါတယ်ရှင်။ အလုပ်ချိန်ကြောင့် အအိပ်အစား မမှန်ပါဘူး ဆရာ၊ ဝမ်းလဲ ချုပ်တက်ပါတယ်။ သမီး အစာမကြေလို့ anticid အရည် ဝယ်သောက်ပါတယ် အဲဒီ့နောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်တာပါ။
ဗိုက် ဘယ်ဘက်ခြမ်းက နာတာ သိပ်စိုးရိမ်စရာ မရှိလှပါ။ အထက်ပိုင်းဆိုရင် အာအိမ်၊ အောက်ပိုင်းဆိုရင် ဝမ်းသွားတဲ့နေရာ ဖြစ်တယ်။ ချက် အထက်-အောက် ပြောတာပါ။ ထိလို့နာတာနဲ့ မထိဘဲနာတာ မတူပါ။ မိန်းကလေးဆိုရင် ရာသီ-မွေးလမ်း ဆိုတာတွေပါ ထည့်စဉ်းစားရမယ်။
A: မစမ်းသပ်ရတာမို့ မှန်းပြီး ရမ်းကုရတော့မှာဘဲ။ ဝမ်းမှန်အောင် လုပ်ပါ။ ရေများများသောက်ပါ၊ အသီးအရွက်-အသီးအနှံ များများ စားပါ။ လိုအပ်ရင် မန်ကျီးမှည့်ဖျော်ရည် သောက်ပါ။ သင်္ဘောသီးမှည့်စားပါ။ ဝမ်းလွယ်စေတဲ့ ဗမာဆေးသောက်ပါ။ အစာစားတာ အချိန်မှန်ပါစေ။ အမျိုးအစားလဲ မှန်တာကောင်းတယ်။ အလုပ်ကြောင့် ထမင်းစားချိန်မရရင် ဘီစကစ်၊ နွားနို့၊ ချော့ကလက် တခုခုစားလိုက်ပါ။ Antacid ဆေးကို အစာခြေအရည် များသူတွေ သောက်ရတယ်။ နာတာကို သက်သာစေဘို့ Diclofenic, Buscoapn စားဆေးတခုခု ဆောင်ထားပြီး၊ နာချိန်မှာ သောက်ပါ။ အမြဲသောက်စရာမလိုပါ။ မိန်းကလေးဖြစ်လို့ ဖြူဆင်းတာ ရှိ-မရှိ (လိုရင်) ပြောပါ။ ရာသီမမှန်တာရှိလဲ (လိုရင်) ပြောပါ။
Q: မေးခွန်းမေးဖို့ ရန်အတွက် အခုလို အခွင့်အရေးရတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျမရဲ့ အမျိုးသားက အသက်၃၆ နှစ် ရှိပါပြီ။ အိမ်ထောင်သက် ကတော့ ၇ နှစ်ရှိပါပြီ။။ သမီး ၁ ယေက် ရှိပါပြီ။ သမီးမွေးကတည်းက ဘာဆေးမှမစားပဲနဲ့ ကလေး မရပါဘူး။ နောက်၁ ချက်က ၂ လကျော်ရှိသွားပါပြီ လိင်ဆက်ဆံဖို့ အတွက် (့) က မရဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။။ အဲ့ဒါ သူက ပန်းသေ (သို့) ပန်းညိုး ဖြစ်နေပြီလားဆိုပြီး စိတ်ဓာတ်ကျပါတယ်။
၁) တကယ်လို့ ပန်းသေတယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးထိခိုက်တတ်ပါသလား။
၂) ပုံမှန် ပြန်ဖြစ်လာအောင် ဆေးတွေ ရှိပါသလား။
A: ဆရာရေးထာတာတွေ ဖတ်ပြီးပြီလား။ ပန်းသေ-ပန်းညှိုးတွေအတွက် သုံးတဲ့ Viagra ဆေးဟာ ကျားအင်္ဂါကို သန်မာလာစေတာ မှန်သလို ဆေးရှိန် ရှိနေတုံး ဆက်ဆံချင်စိတ်လဲ ပေါ်စေတယ်။ သုတ်လွှတ်မြန်နေသူများလဲ တခါပြီး နောက်တခါ ဆက်ဆံချင်စိတ် ပေါ်ဘို့ သုံးနိုင်ပါတယ်။
Q: ကျွန်မ အစ်မေက ၄၈ နှစ်မှာ အရေပြားရောဂါဆန်း ဖြစ်ပြီး ပယ်တီစလုံး ဆေးတွေ အများကြီး သောက်ထားပါတယ်။ အခုတော့ ၅၅ နှစ်ပါ။ ဆေးတော့ မသောက်ရတော့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒူးတွေ နာပါတယ်။ ဘာဆေးများ သောက်သင့်ပါလဲ။
A: ဒူးနာတာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။ တဖက်ထဲလား။ ဘယ်လောက်အထိ နာသလဲ။ အဲဒါအတွက် ဘယ်ဆေး သောက်နေသလဲ။
Q: သွေးသားပြောင်းလဲမှုက ဘယ်အသက်အရွယ်ကနေ ဘယ်အသက်အရွယ်အထိ ရှိနိုင်လဲ။ နောက် တကိုယ့်လုံး ယားယံပြီး ယားယံပြီး ရင် အမဲစက်အဖက်တွေထွက်ထွက်လာပါတယ်။ ဒါက ဘာရောဂါကို ဦးတည်နေပါသလဲ ခင်ဗျား။
A: သွေးသားပြောင်းလဲမှုဆိုဆာ ဘာကို တိတိကျကျ ပြောချင်တာပါလဲ။ ယားယံပြီး ရင် အမဲစက်အဖက်တွေ ထွက်တာ ဖြစ်တဲ့သူရဲ့ အသက်၊ ကျား-မ၊ ဖြစ်နေတာ ဘယ်လောက်ကြာ၊ ဆိုတာတွေ သိရမှ ပြောရတာ ကောင်းပါမယ်။
သမီး အခုကိုယ်ဝန်ဆောင်နေပါတယ်။ ဆရာကိုစာပို့ ပြီးနောက်ပိုင်းမှ သိရတာမို့ဘယ်လိုဆေးမျိုး တွဲဖက်ပြီး သုံးသင့်တယ်ဆိုတာ နည်းလမ်းလေးပေးပါအုံးနော်။ ပျော်ပေမယ့် နောက်ဆက်တွဲအတွက် စိုးရိမ်လို့ကောင်းကောင်း အိပ်မပျော်ဘူးဆရာ။ ကိုယ်ဝန်က တစ်လပဲ ရှိသေးပါတယ်။
ANC (Antenatal Care) ကိုယ်ဝန်ဆောင် စောင့်ရှောက်ခြင်း ကို ဖတ်ပါ။
Posted by Dr. Tint Swe at 8:25 PM